Wasiir Lacag badan xaday oo xukun Cajiib ah lagu riday iyo hadal heyn ka dhalatay !! | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Wasiir Lacag badan xaday oo xukun Cajiib ah lagu riday iyo hadal...
Wasiir Lacag badan xaday oo xukun Cajiib ah lagu riday iyo hadal heyn ka dhalatay !!
Maxkamad kutaala Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xukun hadal heyn badan dhaliyay waxa ay ku riday Wasiirkii hore ee caafimaadka dalkaasi oo lagu helay in lacago badan musuq maasuqay.
Wasiirkii Caafimaadka Congo Oly Ilunga ayaa lagu helay in uu musuq maasuqay lacag ka badan 400,000 oo doolar oo loogu talagalay in lagula dagaallamo cudurka Ebola oo dalkaasi dad badan ku laayay.
Oly Ilunga iyo lataliyihiisa dhinaca maaliyada ayaa lagu eedeeyay in dumumiintiyo been abuur ah ku qaateen lacago badan oo loogu tala galay in lagula dagaalamo cudurka Ebola, waxa uu sidoo kale Wasiirkan lunsaday lacago loogu tala galay daabulida qalab caafimaad.
Maxkamada qaadeysay dacwada loo heestay Wasiirkii Caafimaadka Congo Oly Ilunga ayaa ugu dambeyn Wasiirka ku xukuntay shan sanno oo uu qabanayo shaqo adag, kadib markii lagu helay dambiga xatooyada iyo musuq maasuqa.
Xukunkan lagu riday Wasiirkii hore ee caafimaadka Congo ayaa hadal heyn badan ka dhaliyay gudaha dalkaasi, dadka qaarkood ayaana soo dhaweeyay xukunkan halka kuwa kalana ku tilmaameen xukun jilicsan oo sare u qaadaya musuq maasuqa dalkaasi ka jira.
Previous articleHormuud Telecom oo noqotay shirkaddii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo la siiyo shahaadada caalamiga ee …
Daawo- Baarlamaanka Puntland Oo Ansixiyay Miisaaniyada Sanadkaan.
SWIRO:- Shir looga hadlaayay Tubta Horumarinta Arrimaha Bulshada oo Muqdisho lagu qabtay.
XOG: Shariif Xasan oo Cabsi ka qaba Abaabul ay wado DFS (Godkiisa ayaa biyo ugu soo galeen)
Agaasime Idaacadeed oo lagu dilay magaalada Muqdisho duleedkeeda iyo warar is khilaafsan oo kasoo baxaayo
Masuul xilka looga qaaday arin aan hore oga dhicin dalka oo kusaabsan diiwaan gelin….
Soomaali badan oo kunool dalka Mareykanka oo maanta Wadnaha farta ku haya”hal arin darteed”
Maxay Villa-Somaliya ubalanqaaday Gudoomiyaha Cusub ee G/Banaadir?
Muungaab oo Shaaciyay Xog Shaki weyn galisay in la dilay Gudoomiye Yariisow
Lix Su’aal oo uu C/rashiid Xidig weydiiyay madaxweynayaashii hore ee ku sugan Kismaayo